Pharmaceutical Research Department for Web Portal | Department of Research and Innovation : Ministry of Education (Science and Technology)
Home Pharmaceutical Research Department for Web Portal
ပရဆေးသုတေသနဌာနသည် ဆေးဖက်ဝင်အပင်များမှ အစွမ်းထက်ဓာတုဒြပ်ပေါင်း များကို ထုတ်ယူခြင်း၊ ဆေးပင်များပေါင်းစပ်၍ အာနိသင်သက်ရောက်မှုကို စမ်းသပ်လေ့လာ ခြင်း၊ နည်းစဉ်သစ်များဖြင့် စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်သည့် သုတေသနများဆောင်ရွက်၍ နည်းပညာ လိုအပ်သော ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်သို့ လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် နည်းပညာ လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် နည်းပညာဖြန့်ဖြူးပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းစသည့် သုတေသန လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
– နိုင်ငံတော်အတွက် အရေးပါသော ဆေးဝါးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အတွက် ဆေးဝါး ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်းဆိုင်ရာ သုတေသနလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေးနှင့် လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက် အထောက်အကူ ပြုနိုင်ရန်
– မြန်မာ့တိုင်းရင်းဆေးပင်များတွင် ပါဝင်သောဒြပ်ပေါင်းများ၏ အာနိသင်သက် ရောက်မှုများကို ရှာဖွေ ဖော်ထုတ်နိုင်ရန်
– သိပ္ပံနည်းကျသုတေသနရလဒ်များကို မြန်မာ့တိုင်းရင်းဆေးဝါးထုတ်လုပ်သူများ၊ တိုင်းရင်းဆေးပညာရှင်များ၊ သုတေသီများနှင့်တိုင်းရင်းသားပြည်သူ တစ်ရပ်လုံးသိရှိ အသုံးပြု နိုင်ရန်
– ဆေးဝါးလုပ်ငန်းများကို အထောက်အကူပြုနိုင်မည့် သုတေသနများဆောင်ရွက်၍ စီးပွားဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုတွင် ပါ၀င်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်
– ဆေးဖက်ဝင်အပင်များတွင်ပါဝင်သော ဓာတုဒြပ်ပေါင်းများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်း။
– ဆေးပင်များမှဆေးအာနိသင်ရှိသော အဓိကဒြပ်ပေါင်းများကို ခွဲထုတ်ယူခြင်းနှင့် ဒြပ်ပေါင်းများ၏ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။
– ဆေးပင်များတွင်ပါဝင်သော အင်တီအောက်ဆီးဒင့်၊ ဖလေဗိုနွိုက်နှင့် ဖီနောဒြပ်ပေါင်း များပါဝင်မှု ပမာဏများအား ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်း။
– ဆေးဝါးများဖော်စပ်ခြင်းနှင့် စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ခြင်း။
(က) ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဧပြီလတွင် မြန်မာနိုင်ငံပရဆေးသုတေသနနှင့် တိုင်းရင်းဆေး နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ပရဆေး သုတေသနဌာန၊ မြန်မာ့သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာသုတေသနဦးစီးဌာနမှ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
(ခ) ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၄.)ရက်မှ (၅)ရက်နေ့တွင် မန္တလေးမြို့၊ တိုင်းရင်းဆေး တက္ကသိုလ်မှ ကြီးမှူးကျင်းပသော ဆဌမအကြိမ် တိုင်းရင်းဆေးသုတေသန စာတမ်း ဖတ်ပွဲတွင် “Evaluation of the Antioxidant Activity of Some Medicinal Plants and Myanmar Traditional Medicine Products” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် သုတေသနစာတမ်း ဖတ်ကြားခဲ့ပါသည်။
(ဂ) ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၆)ရက်မှ (၁၀)ရက်နေ့ထိ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနမှ ကြီးမှူးကျင်းပသော 42th Myanmar Health Research Congress တွင် “In Vitro Anti-malarial Activity of Some Myanmar Medicinal Plants, ” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ပိုစတာတင်သွင်းခဲ့ပါသည်။
(က) ၂၀၁၆ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၁၈)ရက်နေ့တွင် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သုတေသနနှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာနနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာန အောက်ရှိ၊ အသေးစားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာနတို့ပူးပေါင်း၍ သုတေသန နှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာနတွင် စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန် အစားအစာများ ထုတ်လုပ်ခြင်း နည်းပညာများအားဖြန့်ဝေခြင်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် အသေးစားနှင့်အလတ်စားထုတ် လုပ်သူများအား သဘာဝအင်တီအောက်ဆီးဒင့်ဖြည့် စွက်ဆေးများကို ပါဝင်ပြသခဲ့ပါသည်။
(ခ) ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၃၀)ရက်နေ့တွင် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သုတေသနနှင့်တီထွင် ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာနနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန အောက်ရှိ၊ အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာနတို့ ပူးပေါင်း၍ SME လုပ်ငန်းရှင်များ လိုအပ်လျက်ရှိသည့် နည်းပညာများကို ပံ့ပိုးကူညီပေးနိုင်ရန် အတွက် “နည်းပညာဆိုင်ရာ Awareness များ Sharing ပြုလုပ်ခြင်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ “(၃၀.၇.၂၀၁၆)”တွင် ပရဆေးသုတေသနဌာနမှ ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးနှင့် အင်တီ အောက်ဆီးဒင့်ဖြည့်စွက်ဆေးထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာ ဖြန့်ဝေခြင်းကို ဆောင်ရွက် ပေးခဲ့ပြီး အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲသို့ တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်ဒေသ အသီးသီးမှ SME လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် စိတ်ပါဝင်စားသူများ စုစုပေါင်း(၁၆၀)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
(ဂ) ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၌ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၁၆)ရက်မှ (၁၈)ရက်နေ့ထိ ကျင်းပပြုလုပ်သော ရာပြည့်အကြို သိပ္ပံပွဲခင်းတွင် ပရဆေးသုတေသနဌာနမှ ပင်လယ်ရေညှိအားမွေးမြူခြင်း သုတေသန ဆိုင်ရာ နည်းပညာများကို ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူများ၊ သုတေသီများ၊ ပြည်သူများအား ဗဟုသုတဖြန့်ဖြူးခြင်းအနေဖြင့် ပါဝင် ပြသဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
(ဃ) ပရဆေးသုတေသနဌာနမှ ၂ဝ၁၂ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၇) မှ ၂၀၁၃ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ (၇) ရက်နေ့တွင် တပ်မတော်သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာသုတေသနဌာမှ သုတေသီ (၂) ဦးနှင့် ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ (၁၃)ရက်မှ (၂၆)ရက်နေ့အထိ တပ်မတော်ဆေးသုတေသနဌာနမှ သုတေသီ (၆)ဦးတို့အားငှက်ဖျားပိုး မွေးမြူပွားများခြင်းနှင့် In vitro ဆေးစမ်းသပ် ပြုလုပ်သည့် နည်းပညာ ဖြန့်ဝေခြင်း တို့ကိုပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါသည်။
မန္တလေးမြို့မှ အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းရှင်မှ အဆိုပြုလာသော “အနံ့ပျောက် သန့်စင်ဆေးရည်ထုတ်လုပ်ခြင်း” နည်းပညာအား လွှဲပြောင်းနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
(က) အပင်များတွင်ပါဝင်သောဒြပ်ပေါင်းများအား ရှေးဦးစမ်းသပ်ခြင်း
(ဂ) ဖီနောနှင့်ဖလေဗိုနွိုက်ပါဝင်မှုတို့ကို တိုင်းတာခြင်း
သုတေသနလုပ်ငန်းအမည် သိပ္ပံအမည် အဂFလိပ်အမည်
၁ မုရားကြီးသုတေသနလုပ်ငန်း Adhatoda vasica Nees Malabar nut
၂ ဆေးခါးကြီးသုတေသနလုပ်ငန်း Andrographis paniculata Nees King of Bitters
၃ တောင်မရိုးသုတေသနလုပ်ငန်း Alstonia scholaris. R. Br. Devil’s Tree, Dita Bark Tree
၄ ငဖုံဆေးသုတေသနလုပ်ငန်း Aristolochia roxburghiana Syn: Aristolochia tagala Aristolochia
၅ ပန်ခါးသုတေသနလုပ်ငန်း Swertia angustifolia Ham var Pulchella burkii Syn: Ophelia angustifolia D.Don Swertia chirata Ham. Sweet Chiretta
၆ ခန်းတောက်မြစ်သုတေသန လုပ်ငန်း Coptis teeta Walls Gold Thread or Root
၇ တမာသုတေသနလုပ်ငန်း Azadirachta indica A. Juss Syn: Melia azadiracha Linn Neem
၈ ကလိမ်စေ့သုတေသနလုပ်ငန်း Caesalpinia bonducella Fleming Syn: C. Crista Linn Bondue nut, Fever nut, Physic nut
၉ ယာခမ်းဝိုက်သုတေသနလုပ်ငန်း Gymnema sylvestre R.Br –
၁၀ ကြောင်ပန်းရွက်သုတေသန လုပ်ငန်း Vitex trifolia Indian Wild pepper Chaste Leaves
၁၁ တောင်ဆီးဖြူသုတေသနလုပ်ငန်း Phyllanthus urinaria Linn Syn: Phyllanthus –
၁၂ ဆိပ်ဖလူးသုတေသနလုပ်ငန်း Nyctanthes arbortristis Linn Night Flowering Jasmine, coral Jasmine
၁၃ နတ်ဆေးဂမုန်းသုတေသန လုပ်ငန်း Saxifraga ligulata Wall Syn: Bergenia ligulata Wall –
၁၄ ပင်စိမ်းနက်သုတေသနလုပ်ငန်း Ocimum sanctum Linn Syn: Ocimum inodorum Bur Ocimum monavhorum Linn Ocimum tenuiflorum Linn Holy Basil
၁၅ တွင်းနက်ကတိုးမြစ်သုတေသနလုပ်ငန်း Ichnocarpus fratescens R.Br Syn: Ichnocarpus radicans Wall Inchnocarpus dasycalyx miguel –
၁၆ ဆေးဝါကြီးသုတေသနလုပ်ငန်း Berberis Asiatic Roxb –
၁၇ ငရုတ်ကောင်းစေ့သုတေသန လုပ်ငန်း Piper nigrum Linn Black Pepper
၁၈ ဥပသကာမြစ်သုတေသနလုပ်ငန်း Hemidesmus indicus Syn: Hemidesmus wallichii Country sarsaparilla
၁၉ နနွင်းခါးသုတေသနလုပ်ငန်း Curcuma comosa Roxb Turmeric
၂၀ နနွင်းကြက်ခြေသုတေသန လုပ်ငန်း Curcuma aromatic Salisb Wild Turmeric, Cochin Turmeric
၂၁ ဂျင်းတက်သုတေသနလုပ်ငန်း Zingiber officinale Roscoe Ginger
၂၂ စိန်ပန်းကလေးသုတေသန လုပ်ငန်း Caesalpima pulcherinia Linn (Poinciana pulcherrinia Linn) Peacock folwer, Barbadaes pride
၂၃ ကျည်းမြစ်သုတေသနလုပ်ငန်း Barringtonia asiatica Indian Oke
၂၄ ဆင်တုန်းမနွယ်သုတေသန လုပ်ငန်း Tinospora cordifolia Miers Heart- leaved moon seed
၂၅ တောင်ကြာနီသုတေသနလုပ်ငန်း Stephania venosa –
၂၆ ဒေါင်းဒိုဥသုတေသနလုပ်ငန်း Stephania rotunda –
၂၇ စပါးလင်ပင်သုတေသနလုပ်ငန်း Cymbopogon citratus D.C.stapf Syn: Andropogon citralus Lemon- grass (West- Indian)
၂၈ တရုတ်စကားခေါက်သုတေသန လုပ်ငန်း Plumeria aculifolia poir Pagoda Tree, Temple Tree
၂၉ ဗောက်ပင်သုတေသနလုပ်ငန်း Physalis minima Linn –
၃၀ ယင်းပြားသုတေသနလုပ်ငန်း Dichroa febrifuga lour –
၃၁ ဆေးပုလဲသုတေသနလုပ်ငန်း Gentiana Kuroo, Royle –
၃၂ မအူလက်တန်ရှည်သုတေသန လုပ်ငန်း Anthocephalus Cadamba miq. Syn: Anthocephalus indica A. Rich, Nauclea cadamba Roxb, Sarcocephalus cadamba Kurz. Wild Cinchona, kadam
၃၃ ပိစပ်ပင်သုတေသနလုပ်ငန်း Eupatorium odoratum Hempagrimony
၃၄ သဘောFကုက္ကိုသုတေသန လုပ်ငန်း Samanea saman (Jacaq) Merr Syn: Enterolobium saman (Prain) Pithecolobium (Pithecellobium) saman Benth Rain Tree
၃၅ ဖုန်းမသိမ်သုတေသနလုပ်ငန်း Blumea balsamifera DC. Syn: Blumea densiflora Camphora officinarum Bash Cinnamomum camphora, Nees Laurus comphora Camphor, Bhemseni Camphor (natural)Shan Camphor,Boneo Camphor, Dog Bush
၃၆ ကြိတ်မှန်ပင်သုတေသနလုပ်ငန်း Eclipta alba Hasssk Syn: Eclipta prostata Linn –
လုပ်ငန်း Withania somnifera Dunal Winter cherry
၃၈ မြင်းခွာသုတေသနလုပ်ငန်း Hydrocotyle asiatica Linn Centella asiatica Linn Indian pennyworth Thick-Leaved pennyworth
၃၉ လင်းနေသုတေသနလုပ်ငန်း Acorus calamus Linn Sweet- Flag
၄၀ မြင်းစဂုံနီသုတေသနလုပ်ငန်း Streptocaulon tomentosum Wt & Arn Syn: Streptocaulon juventar (Lour) Streptocaulon gnififithii (Hook) Jerusalen Thorn
၄၁ သပြေသုတေသနလုပ်ငန်း Eugenia jambolana Lam Black Plum
၄၂ ဘောစကိုင်းသုတေသနလုပ်ငန်း Leucaena glauca Benth Lead Tree
၄၃ ထားဝယ်မှိုင်းသုတေသနလုပ်ငန်း Quisqualis india Linn Rangoon Creeeper Chinese Honey Suckle
၄၄ ကန့်ဘလူသုတေသနလုပ်ငန်း Valeriana Wallichii Dc. IndianValerian
၄၅ ရာတန်စေ့သုတေသနလုပ်ငန်း Brucea Javanica –
၄၆ ကျွဲကျောင်းမင်ဆေးသုတေသန လုပ်ငန်း
Euphobia herta Linn Austratian Asthma Weed, Milk Weed
၄၇ ရှာစောင်းလက်ပတ်သုတေသန လုပ်ငန်း Aloe vera Linn Indian or Barbados aloe
၄၈ ထိကရုန်းသုတေသနလုပ်ငန်း Mimosa pudica Linn Sensitive Plant
၄၉ ဆီးဖြူသုတေသနလုပ်ငန်း Emblica officinalis Phyllanthus emblica Emblic myrobalan Indian goose berry
၅၀ ခွေးသေးပန်းသုတေသနလုပ်ငန်း Ageratum conizoider, Linn. Syn: Ageratum condifolium. Appa grass, Goat wreed, white wreed, Floss flower
၅၁ ရှဉ့်မတက်သုတေသနလုပ်ငန်း Asparagus racemosus Wills Asparagus (or) Wild Asparagus
၅၂ ဆေးကမြင်းပင်သုတေသန လုပ်ငန်း Desmodium gyrans D.C Syn: Hedysarum gyrans Linn. Pseudarthria gyrans Harsle Indian telegraph plant
၅၃ ဖန်ခါးသုတေသနလုပ်ငန်း Terminalia chebula Retg. Chebulic myoobalan Ink- nut, Indiangal mut, Galnut
၅၄ ပဲစောင်းလျားသုတေသနလုပ်ငန်း Psophocarpus tetragonolobus Goabean, Kaffirbean, Winged bean, Four- Angled bean, Manila bean, Princess bean
၅၅ ခွေးလေးယားသုတေသန လုပ်ငန်း Mucuna utilis wall Cowhage, Cowitch
လုပ်ငန်း Costus specious Costus
၅၇ မဉ္စူပန်းပင်သုတေသနလုပ်ငန်း Mirabilis jalapa Linn Four O’Clock flower, Marvel of Peru
၅၈ ရွှေတံတိုင်းသုတေသနလုပ်ငန်း Sida acuta Linn Syn: Sida carpinifalia Linn –
၅၉ ကျွေးဥသုတေသနလုပ်ငန်း Dioscorea triphylla Wild yam, strangle cake
၆၀ ဆီမီးတောက်ဥသုတေသန လုပ်ငန်း Gloriosa superb Linn Superb Lily
Rhycanthus longiflorus Hook –
၆၂ ခရမ်းကဇော့သီးသုတေသန လုပ်ငန်း Solanum torvum Indian Night Shade
၆၃ ကျပိုးကူသုတေသနလုပ်ငန်း Buddleia asiatica lour Syn: 1. Buddleia neenda Hen 2. Buddleia acuminatissina Blume 3. Buddleia discolor Roth Quinine Sacciniba
၆၄ သိကြားမကိုဋ်သုတေသနလုပ်ငန်း Orthosiphon aristatus Bl. Java Tea
၆၅ သဘောFမညှိုးသုတေသနလုပ်ငန်း Vinca rosea Linn Madagascar Periwinkle
မြက်မုန်ညင်းသုတေသနလုပ်ငန်း Cyperus Rotundas Linn Syn: Cyperus hexasta chyus Rottb. Cyperus tenuiflorus Royle Cyperus albisus Herb. Nut Grass
၆၇ ဗိစပ်နွယ်တွင်ပါဝင်သော ဓါတုဒြပ်ပေါင်းများကို ဓါတ်ခွဲလေ့လာခြင်း
၆၈ မြန်မာပြည်တွင် အရိုင်းပေါက် သော Artemisia sp. အပင်များ ဖြစ်ကြသော ဒေါနရွှေဝါ (ခေါ်) မဲဒီဒုတ် (ခေါ်) သစ်နကိုင်းအပင် များအားဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း
၆၉ ပုစွန်စာတွင်ပါဝင်သော Vitamin-C ပါဝင်မှုကို HPLC ဖြင့် ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်လေ့လာခြင်း
၇၀ ရဲယိုသီးမှ အယ်လကာလွိုက် ဒြပ်ပေါင်းထုတ်ယူလေ့လာခြင်း
၇၁ စူလာနဖါပင်မှ အာနိသင် ဒြပ်ပေါင်း ထုတ်ယူလေ့လာခြင်း သုတေသနလုပ်ငန်း
၇၂ ကြွက်ငှက်ဖျားပိုးပွားများခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းခြင်းသုတေသနလုပ်ငန်း
၇၃ မြန်မာ့ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ၏ အဏုဇီဝပိုးမွှားများအပေါ် အာနိသင်သက်ရောက်မှု စမ်းသပ်လေ့လာခြင်းသုတေသန
၇၄ မြန်မာ့ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ၏ ငှက်ဖျားရောဂါပိုးအပေါ် အာနိသင်သက်ရောက်မှုကို စမ်းသပ်လေ့လာခြင်းသုတေသန (In Vitro)
၇၅ ငှက်ဖျားရောဂါအတွက် အသုံးပြု နိုင်မည့် အစွမ်းထက်သော မြန်မာ့တိုင်းရင်းဆေးပင်များကို ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်းသုတေသန
၇၆ တိုင်းရင်းဆေးပင်များ၏ Bioactivity စမ်းသပ်ခြင်းသုတေသန
၇၇ ငှက်ဖျားဆေးစမ်းသပ်ထုတ်လုပ် ခြင်းနှင့် ငှက်ဖျားပိုးအပေါ် နှိမ်နင်းနိုင်မှုရှိသော ဆေးအဆီ များကို ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်းသုတေသန
၇၈ ကင်ဆာရောဂါနှင့် ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားရောဂါ တို့ကိုကုသနိုင်သော ရဲယိုသီးမှ ဒြပ်ပေါင်း များထုတ်ယူခြင်းသုတေသန
၇၉ ငှက်ဖျားရောဂါကုသဆေးအဖြစ် အသုံးပြုရန် အလားအလာ ရှိသော မြန်မာ့ဆေးဖက်ဝင် တိုင်းရင်းဆေးပင်များအား Standard strain တစ်မျိုး ဖြစ်သည့် Chloroquine ဆေးယဉ်ပါးသော ငှက်ဖျားပိုး Plasmodium Falciparum K 1 အပေါ် အာနိသင် သက်ရောက်မှု ကို စမ်းသပ်လေ့လာခြင်းသုတေသန
၈၀ မြန်မာ့တိုင်းရင်းဆေးပင်များအား စံငှက်ဖျားပိုး Plasmodium Falciparum FCR3အပေါ် အာနိသင်သက်ရောက်မှုကို စမ်းသပ်ခြင်းသုတေသန
၈၁ မြန်မာ့တိုင်းရင်းဆေးပင်များ၏ Plasmodium Falciparum ငှက်ဖျားရောဂါပိုးအပေါ် အာနိသင်သက်ရောက်မှုကို စမ်းသပ်လေ့လာခြင်းသုတေသန
၈၂ ဆေးဘက်ဝင်အပင်များမှ ဒြပ်ပေါင်းများ၏ ငှက်ဖျားပိုး ပေါ်တွင် နှိမ်နှင်းနိုင်သော အာနိသင် စမ်းသပ်ခြင်း သုတေသနလုပ်ငန်း
၈၃ သုတေသနပြုဖော်စပ်ပြီးဆေးများ၏ အာနိသင်စမ်းသပ်ချက်များ
၈၄ ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးစမ်းသပ် ထုတ်လုပ်ခြင်းသုတေသန
၈၅ ငှက်ဖျားရောဂါကုသနိုင်သည့် တိုင်းရင်းဆေးတစ်မျိုးကို မှတ်ပုံတင်နိုင်ရန် စမ်းသပ်စစ်ဆေးထုတ်လုပ်ခြင်း
၈၆ မြန်မာ့တိုင်းရင်းဆေးထုတ်ကုန် အချို့နှင့် ဆေးပင်များ၏ အင်တီ အောက်ဆီဒင့်ဂုဏ်သတ္တိကို လေ့လာစမ်းသပ်ခြင်း သုတေသနလုပ်ငန်း
၈၇ သဘာဝအင်တီအောက်ဆီဒင့် အာဟာရဖြည့်စွက်ဆေး (Natural Antioxidant Supplement Medicine) အား စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ခြင်း သုတေသန
၈၈ ပင်လယ်ရေညှိ Microalgae မှ Omega-3 Fatty acid အား စမ်းသပ်ထုတ်ယူခြင်း သုတေသန
၈၉ ပင်လယ်‌ရေညှိများတွင် ပါဝင်သော ကလိုရိုဖီးနှင့် လစ်ပစ်များပါဝင်မှုတို့ကို လေ့လာ စမ်းသပ်ခြင်း။
၉၀ ကင်ဆာရောဂါအတွက်အသုံးပြု၍ ရနိုင်သောမင်းကွတ်သီးမှ Mang၀stin ဒြပ်ပေါင်း ထုတ်ယူခြင်း
– အပင်ထွက်ပစ္စည်းများကိုအခြေခံသည့် သဘာဝခြင်ကာကွယ်ဆေး စမ်းသပ် လေ့လာခြင်း။
– ပယင်းမှဆေးဖက်ဝင်ပစ္စည်းများကို ဖော်ထုတ်စမ်းသပ်လေ့လာခြင်း
– သဘာဝကမ်းဇော်ဆီအတွင်းပါဝင်သော ဒြပ်ပေါင်းဝင်မှုကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်း
မြန်မာ့တိုင်းရင်းဆေးဝါးထုတ်ကုန်အချို့အား အင်တီအောက်ဆီးဒင့်ဂုဏ်သတ္တိကို စမ်းသပ်လေ့လာခြင်း သုတေသန
သုတေသန စမ်းသပ်ဖော်စပ်ထားသော အနံ့ပျောက်သန့်စင်ဆေးရည် နှင့် Herbal Medicine များ
သဘာဝအင်တီအောက်ဆီးဒင့်ဖြည့်စွက်ဆေးထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ
ခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပစမ်းသပ်ခြင်း ငှက်ဖျားသုတေသနလုပ်ငန်း (In Vitro)
Microalgae အား သုတေသနပြု စမ်းသပ်မှုများ
သုတေသနပြုသူများအနေနှင့် အပင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွင် ရုက္ခဗေဒ အမည်မှန်နှင့် အပင်အမည်မှန်ကို တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးနိုင်ရန်အတွက် စုဆောင်းရရှိသည့် ဆေးပင်မျိုးကွဲ (၇၀၀) ကိုပန်းပုံစံကဒ်ပြားများပြုလုပ် ထိန်းသိမ်းထားရှိပါသည်။
၁။ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန
မြန်မာနိုင်ငံပရဆေးသုတေသနနှင့် တိုင်းရင်းဆေး နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ (၂၀.၂.၂၀၁၃ -၂၁.၂.၂၀၁၃) မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ
နည်းပညာဆိုင်ရာ Awareness Sharing ပြုလုပ်ခြင်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် သဘာဝအင်တီအောက်ဆီးဒင့်ဖြည့်စွက်ဆေးအား ပါဝင်ပြသသော မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ (၃၀.၇.၂၀၁၃)
စိုက်ပျိုးရေးအခြေခံစားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်ခြင်း နည်းပညာများ ပံ့ပိုးပေးခြင်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ တွင် ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးနှင့် သဘာဝအင်တီအောက်ဆီးဒင့် ဖြည့်စွက်ဆေးထုတ်လုပ်သည့် နည်းပညာအား ဖြန့်ဖြူးပေးသည့် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ (၁၈.၁၁.၂၀၁၆)
တပ်မတော်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာသုတေသနဌာနနှင့် တပ်မတော်ဆေးသုတေသနဌာနမှ သုတေသီများအား ငှက်ဖျားပိုးမွေးမြူခြင်းနှင့် In Vitro ဆေးစမ်းသပ်ခြင်းများအား နည်းပညာပေးသည့် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ (၂၀၁၃ ၊ ၂၀၁၅)
၂၀၁၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၁၆)ရက်မှ (၁၈)ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြုလုပ်သော ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရာပြည့်အကြိုသိပ္ပံပွဲခင်းတွင် Microalgae Culture ပြုလုပ်ခြင်း နည်းပညာအားကျောင်းသား/သူများအား ရှင်းလင်းပြသသည့် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ
ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ စာတမ်းများထုတ်ဝေခြင်း
1. Khin Khin Win Aung, Myat Chaw Su, Gadae Maung Maung, Yu Yu Nwe Oo, Kay Thi Kyaw, Myint Myint Khaing, Mar Mar Myint, Phyu Phyu Win, “Antioxidant Activity of Formulation of some Myanmar Medicinal Plants Journal of Myanmar Academy of Technology, Vol. 16, July, 2016.
2. Yin Yuan, Khin Khin Win Aung, Xiao-Ku Ran, Xiao-Tong wang, De-Qiang Dou, Feng Donganew sesquiterpene lactone from Yacon Leaves, Natural product Research Talor & Francis Group London, England, 2016.
3. Khin Khin Win Aung, Myat Chaw Su, Gadae Maung Maung, Yu Yu Nwe Oo, Kay Thi Kyaw, Myint Myint Khaing, Mar Mar Myint, Phyu Phyu Win,” Estimation of Antioxidant Activity, Total Phenol and Flavonoid Content of Some Myanmar Medicinal Plants”, Conference on SEA-EU-NET Science, Technology & Innovation Days, Vietnam, 2016.
4. Tinjiao Suo, Xiaotong Wang, Dewei Li, Khin Khin Win Aung, Xiaoku Ran, Deqiang Dou, Feng Dong, “Extraction of Yacon Leaves Enhances Enhydrin Degradation”, J. Chem.Soc.Pak., 38:2, 379-383, 2016.
5. Myat Chaw Su, Gadae Maung Maung, Yu Yu Nwe Oo, Kay Thi Kyaw, Myint Myint Khaing, Mar Mar Myint, Khin Khin Win Aung, “Evaluation of the Antioxidant Activity of Some Medicinal Plants and Myanmar Traditional Medicine Products”, (Proceedings of the Sixth Traditional Medicine Research Congress), Mandalay, Myanmar, Dec, 2015.
6. Hla Myat Mon, Khin Khin Win Aung, Kay Thi Kyaw, Gadae Maung Maung, Yu Yu Nwe Oo, Myat Chaw Su, In Vitro Anti-malarial Activity of Some Myanmar Medicinal Plants, 42th Myanmar Health Research Congress, Programme and Abstracts, The Republic of the Union of Myanmar, Ministry of Health, 6-10, Jan, Yangon, Myanmar, 2014.
7. Khin Khin Wing Aung, Saw Hla Myint, Tin Myint Htwe, Hla Myat Mon, Antimalarial activity of extracts and isolated compounds from tubers of Cyperus rotundus Linn. (Nut grass) on Plasmodium falciparum, (Proceedings of the First International Conference on Science and Engineering, 4, 239-242, December, 2009.
8. Myat Chaw Su, Khin Khin Win Aung, Hla Myat Mon , “Detection of Proceedings of the Anti-malarial Agents of Plant Origin from Selected Myanmar Medicinal Plants, 20th Annual Meeting and International Conference of the Thai Society for Biotechnology, Thailand, 2008.
9. Khin Khin Win Aung, Advances in Natural Products: Role of Herbal Medicine in Myanmar, Daya Publishing House, Delhi, 219-228, 2007.
10. Sabai, Khin Khin Win Aung, Nwe Ni Thin, Kyi Shwe, and Tin Myint Htwe, Evaluation of Bioactivities of Some Myanmar Medicinal Plants Using Brime Shrimp (Artemia salina) Toxicity Test, Journal of Myanmar Academy of Technology, Vol.1, pg. 105-112, 2001.
သုတေသနပြုလုပ်ရာမှတွေ့ရှိချက်များကို စုစည်း၍ “အစွမ်းထက်မြက်သည့် မြန်မာ့တိုင်းရင်းဆေးပင်များ “အတွဲ(၁)၊(၂)” နှင့် “ငှက်ဖျားရောဂါ ပျောက်ကင်းစေနိုင်သည့် မြန်မာ့ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ” စသည့် စာအုပ်များကို ပြုစုထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။